Tsy mbola lasa ny zavatra taloha… | NewsMada
Tsy mbola lasa ny zavatra taloha…
Efa vaky ny ady amin’ny tsy fandriampahalemana, ny ady amin’ny kolikoly, ny ady amin’ny fisian’ny tsimatimanota, ny ady amin’ny fivarotana tanim-panjakana… Ao anatin’ny fanambin’ny fitondrana amin’ny hoe tany tan-dalàna avokoa izany. Ny tsy fanarahan-dalàna no fototry ny ratsy rehetra sy ny fahalovana hatramin’izay.
Amin’izany, manomboka miainga any ifotony ny raharaha: fanadihadiana lalina… Ho tonga any an-tampony? Na ireo atidohabe… Ho hita eo fa mbola andrasana ny fiasan’ny Fitsarana avo (HCJ) hitsarana ireo tomponandraiki-panjakana ambony. Ny lalàna no mila ovaina? Mba hitovy ny fitsarana ny olom-pirenena rehetra, na iza izy na iza.
Mandra-pitrangan’izay hitranga, efa hita aloha fa miverina any amin’ny lasa sy any ifotony ny fanadihadiana ny raharaha sasany. Toy izany, ohatra, ny fivarotana tanim-panjakana. Tsy hisy ho afa-bela amin’izao izay mandika lalàna? Mba tsy ho momba ny fivarotana tanim-panjakana ihany ny fampiharan-dalàna, fa eo koa ireo raharaha hafa.
Ahoana, ohatra, ny amin’ny “Raharaha Rehavana Michel” tany Toliara, desambra 2010, namonoan’ny eo anivon’ny Polisim-pirenena io mpitsara io? Tsy hitahita sy toa vitavita ho azy eny aloha hatramin’izao izay tohiny sy fiafarany. Misy hatrany ny tsimatimanota? Na avela ho lany fe-potoana ho azy eny ny raharaha, na hoe andrasana aza.
Mbola ny eo anivon’ny Polisim-pirenena ihany: ahoana koa, ohatra, ny “Raharaha Antsakabary”, febroary 2017, nahafaty ilay vaviantitra jamba sy nahamay ny tanàna iray manontolo noho ny nafitsoky ny polisy. Manginy fotsiny ny fampijaliana ara-batana sy ara-tsaina ny mponina, tsy fanajana zon’olombeleona tsotra izao.
Vitavita sy tsy hitahita ho azy amin’izao? Tonga koa ity ny “Raharaha Maroantsetra”… Efa mandeha ny fanadihadiana. Mba hisy intsony ny hoe tsimatimanota, na lehibe tsy meloka na tsy mba diso. Tsy mbola lasa ny zavatra taloha. Maro ireo raharaha ratsy mila fohazina, hadihadiana, tsaraina, hamaizana mandika lalàna… Ahoana amin’izay?